विचार / बहस Archives | Page3of 12 | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - नम्बरले जीवनको सफलता निर्धारण गर्दैन ! - page 3
नम्बरले जीवनको सफलता निर्धारण गर्दैन !
अनुषा स्वाँर काठमाडौं । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा 'एसईई' को नतिजा प्रकाशित भएको छ । यस वर्ष चार लाख ६० हजार बढी विद्यार्थी एसईईमा सहभागी भएका थिए । १० कक्षाको अन्तिममा लिइने परीक्षामा कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण नगराउने नीति अवलम्बन गरिएपछिको यो तेस्रो नतिजा हो भने एसएलसी डिग्रीलाई एसईईमा रूपान्तरण गरिएपछिको दोस्रो हो । सबै परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुँदैमा माध्यमिक शिक्षामा सुधार भइसक्यो भन्ने अर्थ लाग्दैन । विद्यार्थीले समग्रमा ल्याएको जीपीए र विषयगत ग्रेड शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सरकार, विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हो ।	थप पढ्नुहोस्
सरल सहयात्रीको खुल्ला प्रश्न : नेपाली हुनुमा पनि गर्व छ र रबी जी ?
सरल सहयात्री प्रिय रबी जी, यसर्थ धन्यवाद दिन चाहन्छु कि, तपाईंले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्ने कानुनी प्रक्रिया पुनः शुरु गरेर फेरि अर्कोपटक नेपाली नागरिक हुने प्रक्रियामा सामेल हुनुभयो भन्ने खबर सुन्न पाइयो । तपाईंको कुरा गर्दा यतिबेला माहोल निकै गरम खालको छ । विभिन्न कारणले विदेशमा बस्ने नेपाली र भर्खर उत्सकुताको प्रश्नैप्रश्न बोकेर अन्योल भविष्यको मार्गमा कुदिरहेका किशोर किशोरीहरु रबी लामिछानेको थोरै पनि आलोचना सहन नसक्ने भएका छन् । यो तपाईंको एक प्रकारले सफलता हो ।	थप पढ्नुहोस्
मित्रता नवीकरणको नवीनतम् प्रयास, १४ वटा सम्झौता र समझदारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको ६-दिने औपचारिक भ्रमण आज 'आइतवार' सकिएको छ । यसक्रममा १४ वटा सम्झौता र समझदारी भए । बिहीवार १४ अनुच्छेदको संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भएको छ । हिमालयपार सम्पर्क स्थायी स्थापित गर्ने ध्येयले गरिएका सम्झौताहरूले व्यापार-बन्दरगाह, हवाईमार्ग, सडक र दूरसञ्चार सञ्जाल समेतलाई समेटेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यधिक महत्त्व दिँदै आउनुभएको तिब्बतको केरुङलाई काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुने भएको छ यद्यपि सम्भाव्य देखिएमा त्यसको निर्माण खर्च कसरी र कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा तय हुन बाँकी नै छ ।	थप पढ्नुहोस्
हेमन्त के सी जाजरकोट । बारेकोट गाउँपालिका–५ तोलखानका ४९ वर्षीय गोविन्दबहादुर सिंह पेसाले पशु प्राविधिक हुन । एकतीस ३१ वर्षदेखि पशु प्राविधिकको रूपमा सरकारी सेवामा कार्यरत उनी गत ५ वर्षदेखि जाजरकोटका जंगलमा दुर्लभ चराहरुको बासस्थान खोज्दै हिडेका हुन् । विश्वमा दुर्लभ र लोपोन्मुख मानिएका चरा र जनावरको खोजीमा रातदिन सक्रिय गोविन्दलाई आफ्नो जीवन र जागिर भन्दा पंक्षी सरंक्षणमा मात्र चिन्ता छ ।	थप पढ्नुहोस्
आमाको दुध बच्चालाई कति उमेरसम्म खुवाउने ? जान्नैपर्ने कुरा
काठमाडौं । सबैलाई थाहा छ, आमाको दूूध बच्चाका लागि अमृत समान हुन्छ। ६ महिनासम्म स्तनपान गराउनु आवश्यक मानिन्छ। तर कति वर्षसम्म स्तनपान गराउने रुबेलायतमा जबसम्म आमा र बच्चा चाहन्छन्, त्यतिबेलासम्म स्तनपान गराउन सकिन्छ भनेर सल्लाह दिने गरिन्छ। स्तनपानबाट बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र उनीहरु बिरामी पर्दैनन्। बेलायतका नेशनल हेल्थ सर्भिस 'एनएचएस' ले पनि स्तनपानका लागि कुनै समयसीमा तोकेको छैन। ६ महिनासम्म आमाको मात्र दूध खुवाउने सल्लाह दिइन्छ। त्यसपछि दूधका साथै अन्य खाद्यपदार्थ खुवाउन सकिन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
पूर्णप्रसाद मिश्र काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको विश्वरुप मन्दिरमा भक्तजनले तीन वर्षदेखि यस्तो सूचना पढ्दैआएका छन् – ‘भूकम्पका कारण मन्दिर पूर्णरुपमा क्षति हुन पुगेकाले प्रवेश निषेध गरिएको छ ।’ यो मन्दिरको पुनःनिर्माण कहिले हुन्छ होला भन्ने खुल्दुली मन्दिर क्षेत्रमा पुग्ने अधिकांश मानिसको मनमा जाग्छ । पशुपति र गुह्येश्वरीबीचको मृगस्थली जंगलमा रहेको मन्दिर विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति भएको थियो । भूकम्पले धुजा धुजा भएको मन्दिर त्यसै वर्ष भदौ ४ गतेको वर्षाले ढल्यो ।	थप पढ्नुहोस्
ध्रुवसागर शर्मा आयो गयो फेरियो व्यवस्था । आफ्नो भने उस्तै छ अवस्था ।। कल्ले के गर्छ ? पाय‘सी सबैले आफ्नै पेट भर्छ ।। बेनी । गुल्मीको वडागाउँ घर बताउने ५७ वर्षीय दिलबहादुर गन्धर्वले सारंगी रेट्दै यो गीत गाउँदा म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–४ बरङ्जामा धेरैका आँखा रसाए । २०३५ सालमा १७ वर्षको उमेरदेखि सारंगी भिरेर विभिन्न जिल्लाका गाउँगाउँमा गीत गाउँदै निस्केका गन्धर्वका तीन छोरी, एक छोरा र एक श्रीमती छन् ।	थप पढ्नुहोस्
कम्यूटरको उज्यालो प्रकाशबाट आँखा बिग्रन नदिन अपनाउनुस यस्तो उपाय
काठमाडौं । लामो समयसम्म कम्प्युटरमा व्यस्त रहनुहुन्छ भने सचेत रहनुहोस् । त्यसबाट तपाइको आँखामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । आखाँलाई कम्युटरबाट बचाउने उपाय १. कम्युटरमा हेर्ने कोण समायोजन गर्नुहोस् तपाईको आखाँ र कम्युटर बिचको कोण र दूरीले यस्ता समस्यामा मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । सबैभन्दा उपयुक्त मनिटर, मोवाइल र ट्ब्लेट आखाँबाट २० देखि २८ इन्ज पर हुनुपर्दछ । र आखाँको तह उचाई भन्दा ४ देखि ५ इन्च तल हुनुपर्दछ । यो उपायले गर्दन दुख्ने समस्याबाट पनि मुक्ति मिल्छ । २.चमक घटाउनुहोस् स्क्रिनको चमकले आखाँलाई काम गर्न अफ्ठेरो हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
बिहान खाली पेटमा के खाने के नखाने ?
काठमाडौं । खानपानको ध्यान राख्न जति जरुरी छ, त्यति नै यसको बारेमा जानकारी लिनु महत्वपूर्ण हुन्छ । कुन समय के खाने के नखाने । खासगरी बिहान खाली पेटमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । शरीरलाई फाइदा पुर्याउने चीजले पनि खाली पेटमा नोक्सान पुर्याउन सक्छ । खाली पेटमा के नखाने ? केराः केरामा केलों में म्याग्नेशियम प्रशस्त हुने भएतापनि खाली पेटमा खाँदा यसले रगतमा खनिज को मात्रा बढाउन सक्छ जसले हृदयको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । दहीः दहीमा राम्रो मात्रामा प्रोबायोटिक्स हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
ट्रेड युनियन खारेज गर्दै सरकार
बिष्णु घिमिरे काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको टे«ड युनियन खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस तीव्र भइरहेको छ । ट्रेड युनियनका नेताहरू मालदार कार्यालयमा सरुवा हुने र घुस लिँदै आफ्ना आसेपासे सरुवा गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बढेको छ । जसका कारण राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनप्रति वितृष्णा बढेको छ । र, अब बन्ने संघीय निजामती ऐनमा दलनिकट ट्रेड युनियन खारेजै गर्नुपर्ने पक्षमा जनमत बलियो बन्दै गएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद पोखरेल नायबसुब्बादेखि नै गृहमन्त्रालयको आकर्षक मानिने विपत् व्यवस्थापन महाशाखामा कार्यरत छन् ।	थप पढ्नुहोस्